गाई – भैसीको दुध भन्दा बाख्राको दुध किन विदेशमा बढी महगोमा बिक्रि हुन्छ र महत्वो दियिन्छ? Madhusudan Bhandari | Canadian Reporters
गाई – भैसीको दुध भन्दा बाख्राको दुध किन विदेशमा बढी महगोमा बिक्रि हुन्छ र महत्वो दियिन्छ? Madhusudan Bhandari
DWQA Ask Question › गाई – भैसीको दुध भन्दा बाख्राको दुध किन विदेशमा बढी महगोमा बिक्रि हुन्छ र महत्वो दियिन्छ? Madhusudan Bhandari
बाख्राको दूध ताकतिलो हुन्छ भन्छन नि हो ?
अनुसन्धान ले प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने गाई – भैसीको दुध भन्दा बाख्राको दुध मान्छेलाई कम एलर्जीक हुने, र पचाउन सजिलो हुन्छ ! दुधको एलर्जी प्राय अल्फा १ भन्ने केसिन Alpha s1 Casein बाट हुन्छ जुन बाख्राको दुधमा गाई – भैसीको दुधमा भन्दा कम हुने गर्छ! हामी सबैलाई थाहा छ दुध आफैमा प्रोटिन, लेक्टोज र क्रिम हुने हुनाले ई सबै दुधमा हुनेपानी संग राम्ररी घुलेसीमात्र दुध लायालो हुने हुन्छ ! दुधमा कुनै करणले बिसाक्त पदार्थको सम्पर्कमा आयोभने यसलाई फाटेर पिउन मन नलाग्ने बनाए बच्चाको रछा गर्ने नियतले प्रकृतिले एन्टीबडीका रुपममा एग्लुटिनिन नामक प्रोटिन पनि राखेको हुन्छ ! गाई – भैसीको दुधमा एग्लुटिनिन अलि बढीनै हुने हुदा एसले अलि चाडै दुध र फ्याट छुटाई दिन्छ !
हाम्रो सरिर ले लायालो नभएको दुध तेती छिटै पचाउदैन ! बाख्राको दुधमा यो समस्सा कम हुन्छ ! जुन प्राणी जति फोहरी हुन्छ तेस्को दुधमा प्रकृति लेनै बडी एग्लुटिनिन विकास गर्छ ! तेसैले गाई को भन्दा भैसीको दुधमा अझ बडी एग्लुटिनिन हुन्छ ! भैसीको दुधमा हुने लेबलको एग्लुटिनिन त येदि ३-४ घण्टा भित्रै उमालेर वा चिसोगरि थनकाउन नसक्दा त एसले दुधको लायालोपन (जसलाई २-४ अछेर पदेकाले होमोजिंनाईज़ homogenized पनि भन्छन) भत्काएर दुधबाट चिल्लो अलग गर्छ !
दुध बाट चिल्लो अलगहुने समयमा चिल्लो ले एस्लाई दुधमा हुने पानीसंग जोड्न सहयोगी हुने रेडिकल (जसलाई सुपर अक्साईड भनिन्छ) जेन्थिन अक्ष्ससीडेज निकाल्छ ! जुन खराब दुधबाट मानिसमा डिएनए मिउटेसनका कारण बाटहुने केन्सरको मूल कारक मानिन्छ ! मान्छेको दुध र बाख्राको दुध यो संदर्बमा सुरचित मानिन्छ ! गाई भन्दा भैसीको दुधमा यो रेडिकल बढी हुने हुदा हाम्रो आयुर्बेदाले गाईको दुध रोजेको रहेछ !
गाई – भैसीको दुधको तुलनामा बाख्राको दुधमा दुधलाई पचाउन गारो गरिदिने लेक्टोज कम हुन्छ, अर्को तर्फ मान्छेलाई चाहिने भिटामिन बि ६, भिटामिन ए, नैसिन चाही धेरै हुन्छ ! अर्कोकुरा बाख्राको दुधमा पोतासीयम potassium धेरै पाईन्छ ! यो पोटासियम ले सरिरमा stomatch अमिल्चुकी हुन दिदैन ! जसरि आमाको दुध खादा बच्चालाई एसिडिटी हुदैन बाख्राको दुधले पनि हुदैन ! तर गाईको दुधले हुन्छ ! गाई भन्दा अझ भैसीको दुधले बढी हुन्छ !
तपाई लाई यो सुन्दा अचम्म लाग्ला मान्छे र बाख्रा को पाठा जन्मदा लगभग उस्तै उस्तै तौल ७ – ९ पौण्डको हुने र बयेस्क मानिस र बाख्रा पनी लगभग १०० – २०० पौण्डको तौल हुन्छ ! गाई – भैसी जन्मदा १०० पौण्डको र बयेस्क हुदा लगभग १२०० पौण्डको हुन्छ !
औसधि र बिसधि हरुले सरिर को तौल अनुसार काम गर्ने हुनले जन्मदै प्रकृतिले “आफ्नो बच्चालाई पुग्नेगरि कति पोषण दिने” अनि “रोगबाट बचाउन / जोगाउन कति एन्टीबडी राखने” भनी प्लान गरेको हुने रैछ ! औसधि र बिसधि अति धेरै वा अति थोरै दुवै ठीक नहुने रैछ !! तेसरी हेर्दा पानी यो केश इस्टडिले बुज्ने लाई केहि ईसरा दिएको छ !!